Job – NepalDailyPost
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित जोखिम रोक्न सरकारले लकडाउन गरेपछि अलपत्र परेका ५० जना कामदारलाई उद्धार गरिएको छ । रुपनी गाउपालिका १ स्थित रुपनी चोकबाट उनीहरुलाई उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आज यहाँ जनाएको छ । कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक तिलक भारतीले ती…
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरु सदरमुकाममै १३३ जना !
जिल्लाका सबै स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम थालेका छन् । दशवटै स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगारी तथा उच्च शिक्षा आर्जन गरेर फर्किनेहरुको तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा शुक्रबार बागलुङमा विदेशबाट आएकाहरुको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । बागलुङ नगरपालिकामा खाडी मुलुक, युरोप, एशिया…
कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा काम गर्न जान नपाएकालाई स्वदेशमै रोजगार दिइने
विदेशमा काम गर्न जान नपाएकालाई स्वदेशमै रोजगार सरकारले कोरोना भाइरसका कारण काम गर्न विदेश जान नपाएका नेपाली कामदारलाई रोजगार प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश काम…
कोभिड–१९ (कोरोना) भाइरसको असर – वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका ५५ हजार रोकिए
कोभिड–१९ (कोरोना) भाइरसको असर विश्वव्यापी हुँदै जाँदा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिइने श्रम स्वीकृति अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेसँगै अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या लगभग शून्यमा झरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रमस्वीकृति बन्द गर्नुअघि दैनिक करीब ३ हजारले अन्तिम श्रमस्वीकृति…
भोजपुरमा तालीमका उत्पादन
भोजपुर, ३० फागुन – घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सहयोगमा टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–८ गोगनेमा सञ्चालित एकमहिने व्यावसायिक तालीममा बनाइएका बाँसका हस्तकला सामग्री । यही फागुन १ देखि आजसम्म सञ्चालित तालीममा २५ युवा सहभागी थिए । तस्वीर – युवराज विष्ट
सरकारले श्रम स्वीकृति अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्‍यो !
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको छ । नेपाली श्रमिक कार्यरत देशमा समेत कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि अनिश्चितकालसम्म श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई…
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकामध्ये ५५.८ प्रतिशत युवा बेरोजगार !
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकामध्ये ५५.८ प्रतिशत युवा बेरोजगार रहेको पाइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार पाँच वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बिताएर फर्केका ४१ प्रतिशत व्यक्ति काम खोज्नै प्रयास गर्दैनन्। पर्केकामध्ये १४.३ प्रतिशत व्यक्तिले काम खोजेर पनि पाउन नसकेको ‘नेपाल श्रम आप्रवासन…
नेपाल सरकारले श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन सार्वजनिक !
सरकारले श्रम आप्रवासनको विविध आयामलाई समेटेर ‘नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२०’ सार्वजनिक गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो । मुख्यतः पाँच भागमा छुट्याइएको प्रतिवेदनमा श्रम आप्रवासन…
ललितपुरले महिलालाई मास्क बनाउने तालीम दियो
ललितपुर महानगरपालिका समाज कल्याण महाशाखाले यहाँभित्र रहेका समूहका महिलालाई मास्क बनाउने तालीम दिइरहेको छ । बजारमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्नसक्ने अवस्थामा मास्कको अभाव भएसँगै उक्त तालीम दिइएको हो । महानगरपालिकाभित्र कूल २९ वडा र ३५१ आमा समूह रहेका छन् । यी वडाका…
वैदेशिक राेजगारीमा कामदारको माग ७५ प्रतिशतले घट्याे
नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक पाँच लाखको हाराहारीमा श्रम शक्ति बजारमा आउने गर्छन् । रोजगारीको खोजीमा करिब ४० लाख युवाशक्ति विदेश पलायन हुने गरेको तथ्याङ्क एकातर्फ छ । विश्वमा फैलिएको कारोना भाइरसका कारण नेपाली कामदारहरुको रोजगारीका गन्तव्य मुलुकहरु संकटमा पर्न थालेका छन् ।…